अर्चना पनेरु पोर्न फिल्म निर्माणको तयारी गर्दै ! यस्तो पोर्न फिल्म आउदैछ छिट्टै - Enepalese.com
अर्चना पनेरु पोर्न फिल्म निर्माणको तयारी गर्दै ! यस्तो पोर्न फिल्म आउदैछ छिट्टै
इनेप्लिज २०७४ चैत २३ गते २२:१५ मा प्रकाशित
अर्चना पनेरु पोर्न फिल्मको तयारीमा रहेको बुझिएको छ । उनि आज फेसबुक लाइभमा आएर यसको बारेमा जानकारी दिएकी हुन् । फेसबुक लाइभमा धेरैले उनको पोर्न फिल्म कहिले आउँछ भनेर सोधेका थिए ।
अर्चनालाई एकजनाले लाइभ भिडियोमा कमेन्ट गर्दै भनेका थिए, ‘तिम्रो पोर्न फिल्म पर्खिदा पर्खिदा बुढो हुन लागेँ । हेर्न नपाई मर्छु कि क्या हो ?’ अर्चनाले पोर्न फिल्मको तयारी भैरहेको र केहि समयमा आउने बताएकी हुन्। उनको जवाफ थियो, ‘मेरो एडल्ट फिल्म स्योर आउँछ । अब डेढ-दूई वर्ष पर्खिनुस न । म तयारी गर्दैछु ।’
लाइभमा नै अर्चनालाई एक जना ले सोधे तिमी चुरोट खान्छौ कि खान्नौं ? अर्चनाले चुरोटको बट्टा नै देखाएर आफू चेन स्मोकर भएको बताइन् । हेर्नुहोस उनको पोर्न फिल्मको तयारी र बिहेको बिषयमा उनले खोलेका वास्तविकता यस्ता छन् :